Nhau - Huya udzidze nezve mitsipa mitatu chinu neni
Huya udzidze nezve mitsipa mitatu chinu neni
Miromo mitatu yemuromo chinhu chakajairika chemakemikari girazi chiridzwa, icho chinoshandiswa zvakanyanya mu organic chemistry kuyedza.
Iyo yemitsipa mitatuinowanzo kuve nechitarisiko chedumbu rakatenderera uye mutsipa mutete. Iyo ine matatu akavhurika, uye iwe unogona kuwedzera akawanda anogadziridza panguva imwe chete, kana iwe unogona kuwedzera condensing machubhu. Kuvhura kwayo kwakamanikana kunoshandiswa kudzivirira mhinduro kubva pakupwanya kana kudzikisira kubuda kwemhinduro, uye inogona kushandiswa nerabha plug, kubatanidza mimwe midziyo yegirazi. Chinwi chinowanzo shandiswa kana mhinduro ichida kuitiswa kwenguva yakareba kana painopiswa kuti iratidzezve. Kuvhurwa kwedende hakufambire kunge beaker, saka mhinduro yacho ingangoyerera ichidzika nekunze kwebhodhoro painodururwa, saka tsvimbo yegirazi inowanzo shandiswa kubata pamusoro pebhokisi kudzivirira mhinduro kubva kuyerera pasi kunze. Nekuti muromo wedengu wakamanikana kwazvo, hauna kukodzera kusanganisa girazi. Kana iwe uchida kumutsa, unogona kubata muromo webhodhoro uye wotenderedza ruoko rwako zvishoma kuti rimhanye zvakanaka uye zvakaenzana, kana kushandisa yakakosha chisanganiso. Kana reflux yatsva, a magnetic agitator anogona kuiswa mubhodhoro kuti amutse neanopisa agitator
(1) kana iko kushandiswa kweakavhurika moto kudziyisa, kunofanirwa kuiswa pane asbestosi mambure kudziyisa, zvekuti ipiswe zvakaenzana; Kana uchipisa, rusvingo rwekunze rwechirongo runofanira kunge rusina madonhwe emvura.
(2) teerera kuiswa chisimbiso kwechando chando kana uchishandisa.
(1) Reactor pakati pemvura uye yakasimba kana mvura.
(2) Gungano regesi reaction jenareta (yakajairwa tembiricha, kudziyisa).
(3) distillation kana kupatsanurwa kwezvinwiwa (zvine branched flasks inozivikanwawo se distillation flasks).
(4) Zvekuchinja kwehupenyu nemamiriro akaomarara
Pfungwa dzeKuchenjerera Mukushandisa
(1) Mvura yakabaiwa haifanirwe kudarika 2/3 yehuwandu hwayo.
(2) kushandiswa kweasbestosi mambure kana ichipisa, kuitira kuti yunifomu ipise.
(3) distillation kana kupatsanurwa kunofanirwa kushandiswa nerubber plug, catheter, condenser, nezvimwe.
Modelling uye kugadzirwa
Kugadzirwa kwematatu-emuromo guchu uye mizhinji-yemuromo guchu kunoitwa nekufemera iro guchu remuviri neforoma yepfupi-mutsipa uye gobvu remuromo pabhokisi pavira guru, uyezve nekumonesa pabendekete remumwe nemumwe chinu chemuiri pachigadziko chemwenje. Yakawanda - muromo bhodhoro ipfupi mutsipa, mukobvu mukanwa, denderedzwa repasi chinwiwa, mubhodhoro muviri wakakomberedza bendekete rakasungirirwa nematatu (matatu mutsipa), mana (mana mutsipa) chinu. Iyo Angle yemutsipa yakakamurwa kuita yakatwasuka mutsipa uye torticollis. Multi-port, kunyanya kushandira pamwe neyakaomesesa kuyedza kushanda, inogona kuunganidza zviridzwa zvinotsigira panguva imwe chete. Yakatwasuka muromo, nekuti mhando dzese dzezvishongedzo zvidimbu zvakagadzika, bhodhoro repakati gwanza rakakura, zviri nyore kumutsa mhinduro, hazvisi nyore kukuvadza zvimwe zvikamu zvechiridzwa uye dhizaini, asi chakanakira ndechekuti nzvimbo yebhora idiki, bharumu pakati pekuvhara, hazvisi nyore kuisa zvimwe zviridzwa, kunyanya zvirevo pazasi pe500mL zvakanyanya kuoma. Bevel, nekuda kwekuvapo kweiyo bevel Angle (10° bevel kana 2 yekuwedzera Angle), kudyisa kunogona kuve kwakaringana uye zvakaenzana kuwedzerwa kuzasi kwebhodhoro nzvimbo. Iko pamusoro pebhodhoro muviri zvakare kune mukana wekuungana kweakasiyana michina zvishongedzo. Nekuda kwehombe gwanza gwanza uye nhambwe huru pakati pemuromo nemutsipa webhodhoro, zviri nyore kuisa, kunyanya diki saizi flask. Asi pakati pezasi pebhotoro nzvimbo ishoma, zvinonetsa kumutsa, zviri nyore kukuvadza zvimwe zvishongedzo uye zviridzwa.
Izvo zvakangofanana neyekutenderera-pasi bhodhoro, asi nekuda kwemuromo wayo mukobvu, mutsipa mupfupi uye nemuromo wakawanda, zvekuisirwa zvekushandisa zvinogona kuwedzerwa, uye kumisikidzwa kuri kuchengetedza basa uye kuri nyore. Pasi pemamiriro ezvinhu akajairwa, iyo yekuvhenganisa bhaa yakaiswa mukati memuromo, mvura inogovanisa fanera yakaiswa mumuromo wedivi, chidimbu chepakati uye chubhu yekudzivirira inoiswa mumuromo muromo, uye thermometer yakaiswa mumuromo wedivi.
Iyo inokodzera iyo synthesis ye organic zvinhu murabhoritari, kana kune iyo yakaoma kunzwisisa kufashaira, kupatsanura uye yekuchenesa mashandiro. Iyo inowanzo kuunganidzwa kuita chidimbu chechidimbu, chishandiso chedhizaidzo kana chishandiso che reflux chine ma thermometers, condensing machubhu, anomutsa mabara, faneli yemvura uye zvimwe zviridzwa. 250-3000ml inoshandiswa kuongororwa nguva dzose uye 5000-10000ml inoshandiswa kumabhizimisi mashoma ekugadzira zvigadzirwa.
Huida ane makore mazhinji echiitiko mukugadzirwa nekugadziriswa kwe chinu oblique chimiro. Mutsara wechigadzirwa wakapfuma uye unogona kusangana nehukuru hwakawanda hwechinu oblique chimiro kuedza kwekushandisa. Huya usarudze zvigadzirwa zvakanaka zvezvikumbiro zvako zvekuyedza.